Fifanarahana teo amin'ny Apple Music sy i Travis Scott hamoaka rakikira manokana | Avy amin'ny mac aho
Fifanarahana teo amin'i Apple Music sy Travis Scott hamoaka rakikira vaovao manokana
Mandehandeha be ny Apple Music, fa tsy hanatsara ny endrika sy endrika ivelany fotsiny. Araka ny nambaranay tamin'ny talata lasa teo, misy mpanakanto maromaro izay hanomboka hitendry ny mozikany ao amin'ny Apple Music fotsiny. Toy ny nataon'i Katy Perry teo aloha tamin'ny "Rise" tokana misy azyAnio no anjaran'ny mpanao rap iray vao herotrerony fa malaza sy ankafizina.
Momba izany Travis Scott, izay nanamafy tamin'ny Alatsinainy taorian'ny resadresaka tamin'ny radio, fifanarahana nifanaovan'ny orinasa apple hanangana manokana ny rakikira faha-3 vaovao nandrasana hatry ny ela, mitondra ny lohateny »Vorona ao anaty fandrika Mihira McKnight«.
Ny tsaho teo aloha dia tonga tamin'ny volana Jona lasa teo fony i Scott nandefa sary tao amin'ny Instagram niaraka tamin'ny lehiben'ny atiny Apple Music, Larry Jackson, izay ahafahanao mamaky ny "Deal vita." Toy izao no niresahan'i Scott tamin'ny tafatafa momba an'i Jackson:
Mahagaga i Larry. Io lehilahy io ... Matoky tena izy. Niresaka tamiko foana izy toy ny hoe hanomboka kaonseritra. Nanome torohevitra ahy foana izy. Noho izany, faly aho niara-niasa taminy tamin'ity tetikasa ity. Zavatra tena tsara »
Jackson dia ekena ho mpanao mari-trano ao ambadiky ny paikadin'ny marika Apple Music. Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny taon-dasa dia nilaza izy fa te hamaha ny olana amin'ny fandefasana mozika amin'ny alàlan'ny famoronana atmosfera clubhouse i Apple. Ny tetika dia nahomby hatreto, miaraka amin'ny Apple Music nahazo exclusives sy fanaovana dokambarotra samihafa avy amin'ireo mpanakanto fanta-daza toa an'i Drake, Future na Taylor Swift.
Tsy mbola fantatra mazava hoe rahoviana no hiseho ilay tetik'asa vaovao an'i Travis Scott, na dia fantatsika aza fa tsy tokony haharitra ela izany. Ity iray ity koa dia nanambara izany tsy ho ela izy dia hiasa amin'ny andiana horonantsary fohy, izay havoaka miaraka amin'ilay rakikira ihany, na dia toa tsy ao anatin'io asa io aza ny Apple Music.
Tsy fantatra ny fe-potoana ifanarahan'ny roa tonta. Ny azontsika antoka dia izany ilay tanora rapper dia mpankafy an'i Apple tsy misy fepetra, satria andro vitsy monja taorian'ny WWDC 2016 nitranga tamin'ny volana Jona lasa teo, nandefa bitsika iray izy izay mankalaza ny fahagagana amin'ny iOS 10 tao amin'ny iPhone-ny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Fifanarahana teo amin'i Apple Music sy Travis Scott hamoaka rakikira vaovao manokana
Hong Kong izao dia manana Apple Pay
Afaka mividy iPhone 7 sandoka amin'ny $ 150 ianao izao